Malunga nathi -Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co. LTD
Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co., Ltd. yasekwa ngo-2016 kwaye sele kudlule ISO9001 inkqubo yolawulo lomgangatho iziqinisekiso. Ukusukela ngo-2016, ibisebenza kwiinkonzo zokuvelisa ezenziweyo (iwelding yesakhelo, ukwenziwa kwesinyithi, ukutshiza kunye ne-CNC).
Inkampani igubungela ummandla opheleleyo weemitha zesikwere ezingama-5,000, kunye nenkunzi ebhalisiweyo ye-yuan yezigidi ezili-10 kunye nabasebenzi abangama-60 bebonke. Indibano yokuqala ibekwe kwiNombolo 101, Taixin Road East, Xinguyong Community, kwisithili saseWanjiang, kwisiXeko saseDongguan. Oku ikakhulu benza ekuqhubeni kunye ibandla iindawo ngqo kwezixhobo esizisebenzelayo non-standard, kwakunye noyilo kunye nemveliso nokubotshwa lwemidlalo.
Iworkshop yesibini ibekwe kwilali iXiaohe, eDaojiao Idolophu, kwisiXeko saseDongguan. Oku ikakhulu iinkqubo ukhuko laser ukusika umatshini, ipleyiti ezantsi izixhobo ezinkulu, ipleyiti ukukhanya, ipleyiti eludongeni kunye nesakhelo, uyadika, wokugaya kunye besila, njl Kukho abasebenzi imveliso 45, abaphathi 6, iinjineli 5 kunye nabahloli esemgangathweni 4.
Esona sixhobo siphambili yindawo ye-machining ye-CNC: ukujika kwe-CNC, ukujika, ukugaya, ukugaya, njl njl.